Home Wararka Mareykanka oo ka fiirsanaya xiriirka Jabuuti diidmadii Dowladda Jabuuti kaddib
Mareykanka oo ka fiirsanaya xiriirka Jabuuti diidmadii Dowladda Jabuuti kaddib
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa Axada maanta ah waxay shaaca ka dhigtey “in dhulkeeda aan loo adeegsan doonin farogelin dagaal oo lagu sameeyo dalalka deriska la ah”.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Maxamuud Cali Yuusuf ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku yiri “Jeneraal Willilam Zana, taliyaha saldhigga Lemonier [ee Jabuuti], wuxuu wareysi uu siiyey BBC-da ku sharxay sida ciidamada Mareykanka ee ku sugan Jabuuti ay u fuliyaan howlgallo lagula dagaalamayo argagixisada iyo ilaalinta muwaadiniintooda haddii loo baahdo daad-gureyn”.
“Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey in dhulka Jabuuti loo adeegsanayo farogelin dagaal oo lagu sameeyo dalalka deriska la ah. Tani ma dhici doonto sababtoo ah dowladda Jabuuti waxaa ka go’an xiriirka ay la leedahay deriskeeda,” ayuu yiri.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in Jabuuti ay qadarineyso iskaashiga muhiimka ah ee ay la leedahay Mareykanka, “ayna hubanti tahay in iskaashigan aanu aheyn mid ka dhan dal kasta oo ay noqoto”.